Mpiara-miasa | Shandong Dingtaisheng Machinary Technology Co., Ltd.
Royal Foods VietNam Co., Ltd. dia iray amin'ireo mpanamboatra lehibe indrindra an'ny Canned Sardine, Mackerel any amin'ny firenena Azia atsimo atsinanana, mitondra ny anarana hoe "Three Lady Cooks Brand" izay ekena sy atokisan'izao tontolo izao.
Khanh Hoa Salanganes Nest Company no orinasa mitarika amin'ny fitantanana sy ny fitrandrahana ireo harena voajanahary tsy voavidy vola ao VietNam. Nandritra ny 20 taona mahery nandrosoan'ny fampandrosoana maharitra, ny orinasa Khanh Hoa Salanganes Nest dia nanao ezaka hatrany tamin'ny famokarana sy ny fanodinana ny vokatra vokariny mba hampidirana ny vokatra avo lenta amin'ny tsena ary hitondrana ny lanja mahavelona ny akany salanganes ho an'ny mpanjifa.
Mayora Group dia natsangana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny 1977 ary nanomboka tamin'izay dia nanjary orinasa manerantany amin'ny indostrian'ny Fast Moving Consumer Goods. Tanjon'ny vondrona Mayora ny ho safidy tsara indrindra amin'ny sakafo sy zava-pisotro ataon'ireo mpanjifa ary manome lanja fanampiny ho an'ireo mpandray anjara sy tontolo iainana.
Ny elatra dia ekena ho vondrona orinasa miorina tsara sy malina any Indonezia miaraka amin'ny tanjaka manokana amin'ny famoronana savony sy detergents. Ny vokarin'ny elatra dia ekena amin'ny kalitaony sy ny fahaizany mividy, ary mora azo.
Noho ny masinina avo lenta DTS sy serivisy miavaka, nahazo fahatokisana ny WTS i DTS, tamin'ny 2015, nampiditra resa DTS sy mixer fandrahoana sakafo i Wings noho ny fanodinana harona paty eo no ho eo.
Amin'ny maha mpanamboatra sy mpanondrana vokatra voan-kazo am-bifotsy kalitao tsara an'i Thailandy, ny mfp dia mampiseho tsipika vokatra marobe izay manomboka amin'ny ronono voanio sy crème, ranom-boanio, nalaina avy amin'ny voanio, ka hatramin'ny menaka voanio virjiny.
Amin'izao fotoana izao, ny orinasa dia mamokatra efa ho 100% ny vola miditra amin'ny fanondranana mankany amin'ny tsena manerantany - ao anatin'izany ny any Eropa, Australasia, Moyen Orient ary ny faritra Amerika Avaratra.
Ny "EOAS" dia anarana mitovy dika amin'ny menaka manitra nanomboka tamin'ny 1894. Nanomboka tamin'ny taona 1999, EOAS dia laharana mpanondrana menaka manitra lehibe indrindra ao Sri Lanka. Nanomboka tamin'ny taona 2017, ny EOAS dia manana ronono voanio am-bifotsy vaovao. Ny DTS dia manome ny fitaovana avy amin'ny famenon-jiro, mpamaly, mpanamory entana, lozisialy sns. hanitatra ny tsenan'izy ireo.
Ceylon Beverage Can dia natsangana tamin'ny 2014 ho toy ny kapoaka vita amin'ny aliminioma tsy miankina ary mamarana ny mpamokatra monina ao Colombo Sri Lanka. Ho an'ny tetikasan'izy ireo kafe am-bifotsy izay OEM ho an'i Nestle, DTS dia manome valin-kafatra, unloader loader automatique feno, trolley elektrika sns.
Brahims (marika an'ny Dewina Food Industries) dia mitovy amin'ny sakafo matsiro, mety, vonona hihinana. Manome ny valiny sterilziation ho azy ireo izahay, nanolo ny marika Japon. Mampiasà tsara ilay retort ary ampitahaina amin'ny iray amin'ireo mpanamboatra famerenan'i Japon, manome fankasitrahana ambony ny DTS toy ny etsy ambany ny mpanjifa:
Delta Food Industries FZC dia Orinasa Free Zone miorina ao amin'ny Sharjah Airport Free Zone, UAE natsangana tamin'ny taona 2012. Ny vokatra Delta Food Industries FZC dia misy: Tomato Paste, Tomato Ketchup, Milk etona, Krim-bolo azo, Sauce mafana, vovo-dronono vita amin'ny ronono feno, Oats, Cornstarch, ary Custard Powder. Ny DTS dia manome tsifotra rano sy setroka rotary roa ho an'ny ronono sy crème etona etona.
Tamin'ny taona 2019, ny DTS dia nahazo ny tetikasan'ny kafe vonona hisotro ny orinasa Nestlé Turkey OEM, mamatsy fitaovana feno ho an'ny retort rano fanodinana rotary, ary miantsona miaraka amin'ny milina famenoana GEA any Italia sy Krones any Alemana. Ny ekipan'ny DTS dia manome fahafaham-po tanteraka ny fepetra takiana amin'ny kalitaon'ny fitaovana, vahaolana ara-teknika henjana sy feno, nahazo ny fiderana ny mpanjifa farany, ny manampahaizana Nestlé avy any Etazonia sy ny antoko fahatelo any Amerika Latina.
Bonduelle no marika legioma voahosotra voalohany tany Frantsa namorona tsipika tsy manam-paharoa legioma am-bifotsy antsoina hoe Bonduelle "Touche de", izay azo hanina na mafana na mangatsiaka. Niara-niasa tamin'ny Bonduelle i Crown mba hamolavola an'ity andalana fonosana tokana ity izay misy karazana legioma efatra: tsaramaso mena, holatra, trondro ary katsaka mamy.